Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): December 2018
at 12/15/2018 12:52:00 PM
Kaja wa aten jaw apnawng gwi ai, galaw gwi ai, dawdan gwi ai, laklai ai ningmu ni hpe myit lu ai gaw RAMMA NI rai nga ai.
Shanglawt lu ai mungdan ni hpe yu mat wa ai shaloi mung malawng gaw ramma ni kaw nna hpang ai re.
Ramma niaarang grai kaba ai re.
Credit : Tara Kasa
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်းရုပ်ထု စိုက်ထူလိုက်ပြီ
at 12/15/2018 12:47:00 PM
အောင်လအန်ဆန်းရုပ်ထု ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားတွင် ဂုဏ်ယူစွာ စိုက်ထူပြီးစီး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဂုဏ်ဆောင် Mix Martial Art – Light Heavy Weight Worl Chanpion နဲ့ Middle Weight world Champion
အောင်လအင်ဆန် ၇ဲ့ကြေးရုပ်တုကို ကချင်ပြည်မြစ်ကြီးနား
Manau Park ၌ယနေ့ဂုဏ်ယူစွာစိုက်ထူထားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိ၇သည်။
Photo from. Majoi Gintawng.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဂုဏ်ဆောင် Mix Martial Art – Light Heavy Weight Worl Chanpion နဲ့Middle Weight world Champion အောင်လအင်ဆန် ရဲ ့ကြေးရုပ်တုကို ကချင်ပြည်မြစ်ကြီးနား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်းရုပ်ထု စိုက်ထူလိုက်ပြီ 10
Manau Park ၌ယနေ ့ဂုဏ်ယူစွာစိုက်ထူထားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဖိနှိပ်ခံ ကချင်လူငယ်၃ဦးရဲ့ နောက်ကွယ်က မိသားစုများထံ နှစ်သိမ့်အားပေးစကားများ ပြောကြားရင်း
at 12/15/2018 12:43:00 PM
M Kawn La
ဒီနေ့ ဖိနှိပ်ခံ ကချင်လူငယ်၃ဦးရဲ့ နောက်ကွယ်က မိသားစုများထံ နှစ်သိမ့်အားပေးစကားများ ပြောကြားရင်း ရောက်ရှိပါတယ်..
ဆန်၁အိတ် ဆီ ၁၀ပိသာ နဲ့ စားဖွယ်စုံများ
ဤ အကူအညီကို လောပန်းကြီး ဆွမ်လွတ်အောင်မိုင်+ဒေါ်ဂျာအိန် မိသားစု မှ လှုဒါန်းတာဖြစ်ပြီး
သူ့ရဲ့သားငယ်လေး ထောင်ကျတာကို လက်မခံနိုင်ဖြစ်လျက်ရှိပြီး နောင် နိုင်ငံရေး မလုပ်ခိုင်းတော့ကြောင်း ပြောလာလို့ မိမိအမျိုးသားတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ရင်း ဖြစ်တဲ့အတွက်
ဂုဏ်ယူခြင်းဖြင့် ဖြေသိမ့်ရန် နှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်..
ကိုဇော်ဂျတ် မိန်းမကတော့ ????
မိသားစုမှာ တဖြည်းဖြည်း စီးပွားရေး ချွို့ယွင်းလာပြီး ရုန်းကန်လာရ၍ မလုပ်စေချင်တော့ကြောင်း
ကျွန်တော်တို့လည်း အားလုံးအတူတူခံစားနေရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမို့ ကိုယ်ချင်းစာ၍ ရောက်ရှိလာရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတော့ ရီဝေသောမျက်လုံးများ
ခံစားချက်တူ ပုံရိပ်များတို့နဲ့ အိမ်ဝအထိ လိုက်ပို့ပါတယ်.
မနန်ပူ အိမ်ရောက်တော့ ????
အသက်၈၀ အဖိုးအိုတစ်ဦး ထွက်ကြိုပါတယ်.
သူ့သမီးလေး ထောင်က ပြန်လွတ်ရင် မူလအလုပ်မှ ပြန်လုပ်နိုင်ပါ့တော့မလား စိုးရီမ်ကြောင်းပြောရှာပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့တွေ ပြန်လာတော့ !!
စီတာပူမနောကွင်းမှာ ကချင်တို့ရဲ့ အားကစားသူရဲကောင်း
ကချင်တို့ရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အတွက်
နိုင်ငံရေးဘက်ပါသော လူမှု ရေး စွန့်လွှတ်စွန့်စားသူ လူငယ်၃ဦး နှင့် သူ့ရဲ့ နောက်ကွယ်က ကြေကွဲလျက်ရှိနေတဲ့ မိသားစုများကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ????
ကချင်တို့ စဉ်းစား ရန် အချက်များစွာ ရှိနေပြီလို့
A chronology of key events-Myanmar profile - Timeline
at 12/13/2018 09:25:00 AM
at 12/13/2018 08:07:00 AM
at 12/13/2018 07:53:00 AM
Burmese Court Jails Liberty and Leadership Program Scholar for Freedom of Speech
at 12/12/2018 08:58:00 AM
Burmese activist and 2016 graduate of the George W. Bush Institute Liberty and Leadership Program Lum Zawng was jailed last week for his role inapeaceful protest.
My friend Lum Zawng,aBurmese political activist and 2016 graduate of the George W. Bush Institute’s Liberty and Leadership Program, was jailed last week for his role inapeaceful protest. His crime? Stating simple facts about the military preventing innocent citizens from escapingaconflict zone.
A court in Kachin State, Burma called his protestsa“defamation of the military” and sentenced him and two other civil society activists to six months in prison andafine of about $300 USD—the country’s minimum wage isalittle over $3 USD per day.
In April, Lum Zawng and his colleagues organizedaseries of peaceful anti-war protests in response to an escalation of violence between government and ethnic-armed forces described as the most intense in decades. Many Kachin residents, who are mostly Christians living near Burma’s resource-rich northern border, were killed or displaced and the International Committee of the Red Cross has indicated the military is blocking relief supplies.
The U.S. Embassy in Burma has urged Burmese officials to reconsider the court’s decision saying, “Inademocracy, this is the kind of activity that should be praised, not prosecuted.” This verdict is another example of the government’s increasing contempt for freedom of expression.
Since 2016, 44 journalists and 142 activists have faced trial in the country. Earlier this year, two Burmese Reuters journalists were sentenced to seven-year prison terms for investigating the military’s actions against the Rohingya,aMuslim ethnic minority group. In October, three journalists were arrested after reporting critically on the financial management of the Yangon municipal budget.
If Burma is still serious about democratization, the country must stop persecuting people for expressing their views and respect freedom of expression asafundamental human right. Young Leaders like Lum Zawng are Burma’s greatest hope for strengthening democracy. Instead of jailing them, the country should engage its people to inform the peace-building process and encourage them to raise their voices.
at 12/12/2018 08:48:00 AM
Pan Naw Chya Khyi
ပိတ်မိပြည်သူလွတ်မြောက်ရေး လုပ်ရှားသူ သုံးဦး
ထောင်ချခံရမှု အပေါ် ကချင်လူထုက မကျေနပ်၍ မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး လွဲမှားနေမှုကို ပြည်သူအင်အား ၅၀၀၀ကျော်ပါဝင်ကာ ယနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ဆန္ဒထုတ်
၁။ မတရားစီရင္ခ်က္ခ်ေသာ တရားသူႀကီး အလိုမရွိ။
၂။ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်သူများ ကို ထိရောက်စွာ
၃။မတရားစီရင်ခံရသူ ဒေါနန်ပူ ၊လွမ်းဇောင်း၊ဇော်ဂျတ် တို့အား ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းလွတ်။
၄။လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော မြန်မာ့တရားစီရင်ရေး ဖြစ်ရေး ဒို့အရေး။
၁။ဒေါ်နန်ပူ (Htoi Gender)ကျားမ တန်းတူရေး ဒါရိုက်တာ တဦးဖြစ်သလို
၂။ရှေ့နေ ကိုလွမ်းဇောင်း(AKYU)ကချင်ကျောင်းသားများဆိုင်ရာ ဥက္ကဌ
၃။ ဦးဇော်ဂျတ် (Myu sha Zing Lum hpung)ကချင်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး အသင်းဥက္ကဌုတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ယခုလို လူ့အခွင့်ရေးလုပ်ရှားသူ ခေါင်းဆောင်များ ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းသည် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးကို ဆက်လက်ဖိနှိပ်မှု ပြူလုပ်နေကြောင်း ကို ကမ႓ာ့လူထုအားမထီမဲ့မြင် ပြသနေကြခြင်း ပင်ဖြစ်နေပါတော့သည်။
လွပ်လပ်ရေးကို ဗြိတိသျှတို့က ဘယ်လိုပေးခဲ့တာလဲ သိရအောင်The Atlantic Charter
at 12/11/2018 10:28:00 AM
Khin Maungoo is with Nang Pu and 89 others.
အတ္တလန်တစ် ချာတာ ဖတ်ကြည့်ပါ
The Atlantic Charter !
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စစ်ပွဲကာလအတွင်းနှင့် စစ်ပွဲအလွန်ကာလအတွက် မဟာမိတ် အင်းအားကြီးနိုင်ငံများ၏ စစ်ပွဲရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ.တွင် အမေရိကန် သမ္မတ ရုဆဘဲလ်တ်နှင့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ချက်ချဲယားတို.ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အဲဒီပူးတွဲကြေညာချက်ကို နောက်ပိုင်းမှာ Atlantic Charter အတ္တလန်တစ်ချပ်တာ ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ကို ဂျာမနီနာဇီတပ်က ဝင်တိုက်ဖို. ပြင်ဆင်နေသည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကို နာဇီတပ်က ဝင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်သည်။အမေ ရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဲဒီအချိန်အထိ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲကို မပါဝင်ခဲ့ပေ။အမေ ရိကန်နှင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ.ကိုအကူအညီလိုအပ်နေသည့် ဗြိတိန်က အမေရိကန်ဆီ အကူအညီတောင်းရာကနေ အခုလို အတ္တလန်တစ်ချပ်တာဆိုတာ ပေါ်လာ ခဲ့သည်။ ပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာ အဓိက (၈) ချက်ပါဝင်သည်
( ၁) ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်ရော၊အမေရိကန်အနေဖြင့်ရော နယ်နိမိတ်မတိုးချဲ.ရ။
(၂) နယ်နိမိတ်ပြန်လည် ချမှတ်တဲ့နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထုရဲ.ဆန္ဒ အတိုင်းသာ ဖြစ်ရမည်။
(၃) လူများအားလုံး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ပြဌာန်းခွင့်ရှိစေရမည်။
( ၄) ကူးသန်းရောင်ဝင်မှု လမ်းကြောင်း အတားအဆီးများ လျှော့ချမည်။
( ၅) ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဖွံ.ဖြိုးမှု ဖြစ်စေ ရမည်။
(၆) ပါဝင်သူများ အနေဖြင့် လိုချင်တဲ့ကမ္ဘာနှင့် ကြောက်ရွံ.တဲ့ကမ္ဘာမှ လွတ်မြောက် အောင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
( ၇) ပါဝင်သူများအနေဖြင့် ပင်လယ်လွတ်လပ်မှုအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရ မည်။
(၈) ကျူးကျော်နိုင်ငံများ လက်နက်ချရေးနှင့် စစ်ပွဲအလွန် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ဖြစ်စေရမည် ဟု ရေးသားထားပါသည်။
ဤအတ္တလန်တစ်စာချုပ်ကို အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို. ပူတွဲရေးသားလက်မှတ် ထိုးပြီးတဲ့နောက် ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ.တွင် မဟာမိတ် နိုင်ငံများက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နာဝါရီလ (၁) ရက်နေ. တွင်ဟစ်တလားဝါဒကို ဆန်.ကျင် ကာကွယ်သွားဖို. နိုင်ငံအများစုက စုပေါင်းပြီး ကုလသမဂ္ဂကြေညာစာတမ်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကြေညာခဲ့ပြန်သည်။ ဤနေရာမှာ အတ္တလန်တစ်စာချုပ်သည် အာရှနိုင်ငံများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိ ဆန်းစစ်လေ့လာတဲ့အခါ အမေရိကန်သမ္မတ ရုဆဘဲလ်တ်၏ မိန်.ခွန်း စာရေး ဆရာ ရောဘတ် အီး ရှာဝုဒ်က ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးပါသည်။ အိန္ဒိယ၊ဗမာ၊မလေရှားနှင့် အင်ဒိုနီရှားက ပြည်သူများမှ အတ္တလန်တစ်စာချုပ်ကို ပစိဖစ်နှင့်အာရှနိုင်ငံများအထိ တိုးချဲ.မှုရှိမရှိ မေးခွန်စထုတ် မေးမြန်လာတဲ့အချိန် မှာဘဲ ``မဟာမိတ်များ၏ကူညီမှုရယူမှသာလျှင် အောင်မြင်နိုင်မည့် စစ်ပွဲတစ်ခု အနေဖြင့် ရုဆဘဲလ်ရဲ.ဖြေရှင်းပုံက ဗြိတိန်ကို ဖိအားပေးမှုတစ်ချို.လုပ်ခဲ့သော် လည်း ကိုလိုနီနိုင်ငံများ၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်၍ စစ်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့ အထိ ရွှေ.ဆိုင်းထားသည်ဟု`` ရေးသားထားပါသည်။အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စစ်ပွဲပြီး ရင် အင်္ဂလိပ်တို. သိမ်းပိုက်ထားသည့် ကိုလိုနီနိုင်ငံများကို ပိုင်ရှင်လက်ထဲ ပြန် အပ်ပေးရမည်။
Roosevelt's speechwriter Robert E. Sherwood noted that "it was not long before the people of India, Burma, Malaya, and Indonesia were beginning to ask if the Atlantic Charter extended also to the Pacific and to Asia in general." Withawar that could only be won with the help of these allies, Roosevelt's solution was to put some pressure on Britain but to postpone until after the war the issue of self-determination of the colonies.
အတ္တလန်တစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ကြားသိရပြီး အခွင့်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချခဲ့ ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ယင်းကဲ့သို. ဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှ စာချုပ်ရဲ. ဒုတိယအချက်မှာ ပါသည့် နယ်နိမိတ်များပြန်လည် ချမှတ်တဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထု ရဲ.ဆန္ဒအတိုင်းသာ ဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့အချက်နဲ.အညီ ဗမာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေး ပေးတဲ့အခါ ဗမာတစ်မျိုးတည်းလက်ထဲကို မအပ်ခဲ့ပေ။အောင်ဆန်းတို.အဖွဲ.က နှစ်ခါတောင် သွားတောင်းခဲ့ပြီး အဆင်မပြေမှ ပင်လုံစာချုပ်ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုရဲ. သဘောတူညီချက်ကို အင်္ဂလိပ်ထံ ပြန်တင်ပြပြီး တောင်းလာတယ်။တောင်တန်းဒေသက ပြည်သူများ ဗမာနဲ.အတူ လွတ်လပ်ရေးယူမည်ဆို တဲ့ ဆန္ဒကို အင်္ဂလိပ်တို. မဖြစ်မနေ လေးစားပြီး ပေးခဲ့ရသည်။Crd
66Ingun Jawa, Lamaisha Bsix and 64 others
Khin Maungoo https://www.amazon.com/Atlantic-Charter.../dp/0312089309
The Atlantic Charter (The World of the Roosevelts)